စိတ်ပူနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက် ဆေးရုံကိုဒုတိယအကြိမ်ပြန်သွားခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းမှန်ကို ရှင်းပြလာတဲ့ ထွန်းကိုကို - Cele Connections
စိတ်ပူနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက် ဆေးရုံကိုဒုတိယအကြိမ်ပြန်သွားခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းမှန်ကို ရှင်းပြလာတဲ့ ထွန်းကိုကို
သရုပ်ဆောင် ထွန်းကိုကိုကတော့ သရုပ်ဆောင်ကောင်းသလို ရုပ်ရည်ချောမောရုံသာမက ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို တစ်ခဲနက်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မင်းသားတစ်လက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ထွန်းကိုကိုက Covid-19 ရောဂါပိုးကူးစက်ခံခဲ့တာကြောင့် ဆေးရုံမှာ ဆေးကုသမှုခံယူခဲ့ရပြီး ဒီကနေ့ နိုဝင်ဘာလ (၇) ရက်နေ့မှာတော့ ဆေးရုံက ပြန်ဆင်းလာခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ထွန်းကိုကိုက ဆေးရုံပေါ်က ဆင်းလျင်ဆင်းချင်းပဲ ဖုန်းဆက်ခေါ်ခဲ့တာကြောင့် ဆေးရုံကို ပြန်သွားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရင်းကို စိတ်ပူနေကြတဲ့ သူ့ရဲ့ ပရိသတ်တွေဆီ အခုလိုပဲ ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။
“မင်း.. ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီလား ? မင်း.. မဲပေးခွင့်ရှိပြီလား ? ဆရာမတွေက ကျွန်တော့ကို ၁၈ နှစ်မပြည့်သေးဘူးထင်လို့ ပြန်ခိုင်းလိုက်တာ။ ရုံးပြန်ရောက်တော့မှ ဖုန်းဆက်ပြီး ပြန်လာပါဦးတဲ့။ အခု တော့ ဆေးရုံ မှာ၁၈ ရက်မြောက်တဲ့နေ့ ဆေးရုံကဆင်းပြီးပြန်ရောက်မှ ဆေးရုံကို ပြန်သွားပြီး မဲပေး လိုက်ရတယ်။ နိုင်ငံသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ တာဝန်ကျေသွားပြီ ❤️❤️❤️” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှာ ပြောပြလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ထွန်းကိုကိုကတော့ ဆေးရုံကို ပြန်သွားခဲ့ရတယ်ဆိုတာကြောင့် ဆေးစစ်ချက်အဖြေမှားယွင်းမှုများဖြစ်သလားလို့ ပရိသတ်တွေက စိတ်ပူနေကြပေမယ့် ထွန်းကိုကိုကတော့ အကြောင်းအရင်းမှန်ကို ပြောပြလာခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးတဲ့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Source: Yanpaing Tunko’s fb
စိတျပူနကွေတဲ့ပရိသတျတှအေတှကျ ဆေးရုံကိုဒုတိယအကွိမျပွနျသှားခဲ့ရတဲ့ အကွောငျးအရငျးမှနျကို ရှငျးပွလာတဲ့ ထှနျးကိုကို
သရုပျဆောငျ ထှနျးကိုကိုကတော့ သရုပျဆောငျကောငျးသလို ရုပျရညျခြောမောရုံသာမက ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးမှုကို တဈခဲနကျပိုငျဆိုငျထားတဲ့ မငျးသားတဈလကျပဲ ဖွဈပါတယျ။ ထှနျးကိုကိုက Covid-19 ရောဂါပိုးကူးစကျခံခဲ့တာကွောငျ့ ဆေးရုံမှာ ဆေးကုသမှုခံယူခဲ့ရပွီး ဒီကနေ့ နိုဝငျဘာလ (၇) ရကျနမှေ့ာတော့ ဆေးရုံက ပွနျဆငျးလာခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ထှနျးကိုကိုက ဆေးရုံပျေါက ဆငျးလငျြဆငျးခငျြးပဲ ဖုနျးဆကျချေါခဲ့တာကွောငျ့ ဆေးရုံကို ပွနျသှားခဲ့ရတဲ့အကွောငျးအရငျးကို စိတျပူနကွေတဲ့ သူ့ရဲ့ ပရိသတျတှဆေီ အခုလိုပဲ ပွောပွလာခဲ့ပါတယျ။
“မငျး.. ၁၈ နှဈပွညျ့ပွီလား ? မငျး.. မဲပေးခှငျ့ရှိပွီလား ? ဆရာမတှကေ ကြှနျတော့ကို ၁၈ နှဈမပွညျ့သေးဘူးထငျလို့ ပွနျခိုငျးလိုကျတာ။ ရုံးပွနျရောကျတော့မှ ဖုနျးဆကျပွီး ပွနျလာပါဦးတဲ့။ အခု တော့ ဆေးရုံ မှာ၁၈ ရကျမွောကျတဲ့နေ့ ဆေးရုံကဆငျးပွီးပွနျရောကျမှ ဆေးရုံကို ပွနျသှားပွီး မဲပေး လိုကျရတယျ။ နိုငျငံသားတဈယောကျအနနေဲ့ တာဝနျကသြှေားပွီ ❤️❤️❤️” ဆိုပွီး သူ့ရဲ့ ဖစျေ့ဘုတျစာမကျြနှာမှာ ပွောပွလာတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ထှနျးကိုကိုကတော့ ဆေးရုံကို ပွနျသှားခဲ့ရတယျဆိုတာကွောငျ့ ဆေးစဈခကျြအဖွမှေားယှငျးမှုမြားဖွဈသလားလို့ ပရိသတျတှကေ စိတျပူနကွေပမေယျ့ ထှနျးကိုကိုကတော့ အကွောငျးအရငျးမှနျကို ပွောပွလာခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဖတျရှုပေးတဲ့ Cele Connections ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။
ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ သူမရဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတွေ Share ပေးဖို့တောင် ချစ်သူမောင် ကြိုက်တတ်တဲ့အရာလေးတွေနဲ့ အပေးအယူလုပ်ခဲ့ရတဲ့ ရီရီပွင့်ဖြူ
ဘဝရဲ့မှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ “မကြွေပါနဲ့ဆာကူရာ”ဇာတ်ကားနဲ့ ပက်သတ်ပြီး ငိုခဲ့ရတဲ့ အမှတ်တရတွေတောင်ရှိကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ ပတ်ထရစ်ရှ